Vashandi vehurumende varatidzira muHrarare vachiti vanoda kuti mari dzavo dziwedzerwe kuitira kuti vararame hupenyu huri nani.
Vashandi ava vasvitsa magwaro enyunyuto kuhurumende.
Hutungamiri hwemasangano anomirira vashandi vehurumende ari pasi pesangano reApex Council hwaratidzira muHarare nhasi pamahofisi egurukota rezvevashandi, Amai Sekai Nzenza, pamwe negurukota rezvemari, VaMthuli Ncube, husati hwasiya magwaro enyunyuto kumapazi ehurumende aya pamwe nekudare reparamende.
Varatidziri ava, avo vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvichitsoropodza kushomeka kwemari yavanotambiriswa nehurumende iyo yavati yakafanana nemhepo, vamborambidzwa nevanochengetedza pamahofisi emapazi ehurumende maviri aya asi vazobvumidzwa kuti vashoma vavo vapinde mushure mekunge varamba vachiimba vari pamisuwo yemahofisi aya.
Gwaro revaratidzira ava, iro ravapa hurumende, rinoti vashandi vanoda kupihwa mari inoita kuti mushandi anotambira mari iri pasi pasi apihwe madhora zviuru zvina zvine mazana manonwe nemakumi mashanu pamwedzi, iri mari yema RTGS.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemari VaMthuli Ncube sezvo vanzi vanga vasiri muhofisi avo.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvevashandi, VaLovemore Matuke, vaudza varatidziri ava pavasvika pahofisi pavo kuti hurumende ichaedza napose painogona napo kugadzirisa nhuna dzavo.
Zvichakadai, mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, VaObert Masaraure, vati nhengo dzesangano ravo dzichatanga kusaenda kubasa zvachose kubva neMuvhuro svondo rinouya vachiti hurumende yaramba yakaisa zvimiti munzeve pachikumbiro chavo chekuti vashandi vatambiriswe mari yakaringana nemadhora ekuAmerica avaisimbotambiswa pamwedzi hurumende isati yaunza ma bond notes.
Kuratidzira kwaitwa nehutungamiri hweApex Council nhasi kwauya zvichiteverawo kuchechema kuri kuita vashandi munyika yose avo vari kuti mari yavanotambiriswa haisisina huremu pakatariswa kushaya simba kuri kuita mari yemunyika pamwe nekusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika.
Hutungamiri hweApex Council hwaratidzira uhwu hwati huchadzoka nemhomho yevashandi kumahofisi aVaNcube mumazuva mashoma ari kutevera kana hurumende ikasateerera zvichemo zvavo.
Vashandi vehurumende vakaramba kutambira mari yavakanga vanzi vachapihwa nehurumende inoita madhora emaRTGS makumi mapfumbamwe nemanomwe pamunhu.
Hurumende yakanga yati ichawedzera mari dzevashandi vose nemari inoita zana nemakumi masere emamiriyoni emadhora emaRTGS kubva mwedzi uno kusvika panopera gore kuvashandi vayo vose vari pasi peApex vanosvika mazana matatu negumi rezviuru.
Vashandi ava havasanganisiri vana chiremba, vanamukoti, mapurisa, mauto nevamwe vasingapinde muApex Council